Home Wararka Uganda oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay Somali wadata walxaha Qarxa
Booliska Uganda oo wada howlgallo kadib qaraxyadii toddobaad kahor ka dhacay dalkaas, ayaa sheegay inay xireen afar qof oo Soomaali ah oo walxo qarxo keenay hotel lagu wado inuu toddobaadkan booqdo madaxweyne Yoweri Museveni.
Afhayeenka booliska Fred Enanga ayaa sheegay in walxha qarxa lagu qabtay baaris lagu sameeyey baabuur yaallay hotel-ka Speke Munyonyo. “Kooxda wada-jirka ah ee ka hortagga argagixisanimada waxay gacanta ku hayaan afar qof Soomaali ah,” waxaa sidaas yiri Enanga oo la hadlay wakaaladda wararka AFP.
Hotelkan caanka ah, oo horey u marti-geliyey kulan madaxeedyo, ayaa lagu wadaa in Khamiista berri ah lagu qabto kulanka golaha wasiirada, oo uu guddoominayo madaxweyne Yoweri Museveni. Ilaa iyo hada Booliska ma shaacin magacyada Soomaalida la xiray.
Booliska ayaa bishii tagtay sheegay in labada qarax ay fuliyeen dagaal-yahanada kooxda ADF. Uganda ayaa sidoo kale ADF ku eedeysay qarax la fashiliyey oo bishii August lala beegsan lahaa tacsida Jeneraal lagu naaneysi jiray “Libaaxa Muqdisho,” oo Al-Shabaab kula dagaalamay Muqdisho.